iPad (2019): ndị dị ọnụ ala karịa ugbu a karịa [Nyochaa] | Akụkọ akụrụngwa
Apple anọgidewo na-emegharị iPad iji mee ka ọ dị ọhụrụ na ahịa na karịsịa n'ihi na Tim Cook (Apple CEO) kwuru ebe ahụ - site na 2015 na n'ikpeazụ iPad ga - abụ onye nnọchi maka PC, ihe na-anọgide na-ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-aga n'ihu ịhazigharị usoro PC iji nye ihe dị gburugburu yana karịa ngwaahịa niile dị iche iche nwere otu isi atụmatụ: ọnụahịa. N'ebe ugwu Pro na ikuku Ikuku, iPad ọdịnala ka na-enye ogo / ọnụego nke na-eme ka ọ maa mma. Chọpụta site na nyocha miri emi anyị nwere 2019-inch iPad (10,2), iPad dị ọnụ ala ma ọ bukwara ibu.
1 Design: Emere na Apple
3 Otu akụkụ mgbasa ozi pụtara ìhè
4 Njikọta na nnwere onwe: Ying na Yang
Design: Emere na Apple
Ndị ụlọ ọrụ Cupertino emetụla iPad a kamgbe ọ malitere na ọkwa ọkwa. Anyị nwere okpokolo agba ochie, nke nwere aluminom zuru ezu ebe naanị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, igwefoto na nyocha "iPad" na-enwu. Ka ọ dị ugbu a, n'ihu anyị nwere bọtịnụ Touch ID, igwefoto selfie na enweghị ihe ọ bụla. Nhazi nke bọtịnụ olu na akụkụ aka nri na bọtịnụ "ike" na mpaghara elu ka agbanweghị na oge. Ihe ndị a niile na - eme ka anyị nwee ike 250 x 174,5 x 7,5 millimeters.
Ibu ibu: 483 grams
Size: 250 x 174,5 x 7,5 mm
Banyere oghere ihu anyị bụ sentimita 10,2, anyị esila na 9,7 sentimita asatọ nke iPad na-adọkpụ kemgbe mmalite ya. Ya mere, Apple na-ewepụta ohere iji mee ka ihuenyo ahụ dịrị na nwanne ya nwoke nke okenye bụ iPad Ikuku, nke nwere oke nha anya. Banyere ibu, anyị na-achọta gram 483, nke anaghị eme ka ọ bụrụ ngwaahịa dị mfe, ma ọ na-adị siri ike ma dị mma iji ya eme ihe mgbe niile. Anyị nwere njikọ 3,5mm Jack n'elu, ọ bụghị ya na USB-C na ala, ebe njikọ nke Lightning nke Apple ka na-enye iwu.
Nke a iPad na-etu ọnụ 3GB nke Ram, ihe nchekwa 32GB nke nwere ike gbanwere maka nsụgharị 128GB (na-enweghị ohere nke mmụba) ma na-agbakwunye Apple A10 Nhazi usoro, mbipụta ka mma nke A10 nke iPhone 7 Plus rụnyere n'oge ahụ na nke kwekọrọ na nhazi nke onye bu ya ụzọ, 2018th ọgbọ iPad (XNUMX). Nke a bụchaghị mmejọ, ọ bụ ezie na Apple nwere ike gbatịa karịa, ike egosila na ọ ga-ezu.
Nlereanya iPad (2019) 10.2
Nhazi A10 Fusion
Ihuenyo 10.2-anụ ọhịa LCD 2.160 x 1620 (264dpi)
Igwefoto na-aga n'ihu 8 MP
Igwefoto n'ihu 5 MP
Ebe nchekwa RAM 3 GB
Nchekwa 32 / 128 GB
Mkpisiaka agụ Aka Nkata
Batrị 32.4 vh 12W ibu
Usoro njikwa iPadOS 13.4
Njikọta na ndị ọzọ WiFi ac - Bluetooth 4.2 - LTE
Ibu ibu 483 grams
Akụkụ X x 250 174.5 7.5 mm
Ahịa 379 €
Linkzụta njikọ BUYE
Ha ekpebie nzọ na ndozi ndị ọzọ dịka nha ihuenyo. Banyere nche, anyị na-anọ na Touch ID, enweghị ihe ọ bụla gbasara ID ID na-ewu ewu nke na-adịgide nanị maka ngwaahịa Pro na iPhones. N'ime ule anyị, iPad egosila na ọ nwere fechaa ọbụlagodi na-agba iPadOS 13.4, ụdị kachasị dị ugbu a, na-enweghị mmachi na ịchọ ngwa dị ka Pixelmator na Logitech Crayon smart pen.
Otu akụkụ mgbasa ozi pụtara ìhè
IPad a na - efu obere, agbanyeghị, nke ahụ abụghị mmetụta anyị na - ahụ site na ya 10,2 ″ ihuenyo na 2160 x 1620 mkpebi (264 dpi). N'agbanyeghị ịbụ otu LCD panel, anyị maara ihe ndekọ egwu Apple n'ịgbanwe ya, pụtara ìhè n'akụkụ niile. Da na-apụta maka usoro stereo ya na ala, dị ike ma doo anya. Otu ụzọ okwu ọzọ na-efu n'akụkụ nke ọzọ, mana nke ahụ amachibidoro 'Pro' nso.
Anyị na-achọpụtakwa ihe ndị na-adịghị ike, nke mbụ bụ na anyị enweghị laminated panel, nke ahụ bụ, anyị nwere obere ikuku ikuku n'etiti iko na LCD panel, iPad Air 2 bụ iPad ikpeazụ nwere njirimara a na "ụdị nsụgharị nke iPad" enweghị usoro a. Ọ dị ọnụ ala idozi mana na enweghị a na nke "Ezi ụda" anyị na-atụfu ụfọdụ integer. Agbanyeghị, ọzọ, anyị hụrụ tandem magburu onwe ya. Anyị na-ewere ohere ikwu maka igwefoto ugbu a, 5MP n'ihu na mkpebi 720p na azụ 8MP na mkpebi 1080p nke ga-eme ka anyị pụọ n'ụzọ maka mkparịta ụka vidiyo, ngwa nha ma ọ bụ nyocha akwụkwọ, na-enweghị ọfụma ọzọ.
Njikọta na nnwere onwe: Ying na Yang
Ọ pụtara na ugbu a, ọnụ ala dị ọnụ ala karịa iPad gụnyere Smart Connector n'akụkụ ya, nke na-enye anyị ohere ịgbakwunye ngwaọrụ ndị dị na mpụga dị ka Smart Keyboard ma ọ bụ ihe mkpuchi ọhụrụ Logitech nke gunyere trackpad. Nke a mepee uzo di iche iche nke iPad karie na nke a.
Ebee ka anyị hutara "nsogbu" bụ na enweghị USB-C, ebe na iPad Pro ọ nọ na iPad a (2019) anyị na-eche kegide Lightning njikọ ọzọ nke ahụ gara n'ihu na-enye anyị a 12W max ibu (tinyere ihe nkwụnye ọkụ). Nke a na - egbochi ohere mgbe ọ na - abịa ijikọ ngwaọrụ ndị dị na mpụga dị ka isi mmalite nchekwa wee si otu a rite uru nke ngwa faịlụ dị ike nke iPadOS gụnyere. Anyị anaghị echefu na iPad a zuru ezu dakọtara na ọgbọ mbụ Apple Pencil (ọbụghị nke abụọ).
Nnukwu batrị nke iPad na njikwa nke iPadOS 13.4 mere nke ọ na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ ụbọchị. Anyị ga-anọgide na-atụle iPad a dịka isi ihe eji eri ọdịnaya, ọ nwere ntụsara ahụ na Netflix, Disney + na nyiwe ndị ọzọ, mana ọ naghị ada n'ihu Okwu, Pixelmator na ngwa ndị ọzọ raara nye ihe okike. Anyi aghaghi icheta na iPad a, ekele iPadOS 13.4, na-enye anyị ohere ijikọ ngwaọrụ ndị dị na mpụga site na Bluetooth dịka kiiboodu na oke.
Ọ ka bụ otu n'ime ngwaahịa kachasị mma n'ihe metụtara ogo / ọnụahịa Apple na-ekwusi ike na katalọgụ ya, anyị nwere ike inweta ya site na euro 356 na weebụsaịtị dị ka Amazon, n'agbanyeghị eziokwu na unit anwale nwere efu anyị 233 euro na a kpọmkwem nwa oge na-enye. Cheta na ngwaahịa a dị na agba ntụ na ọlaọcha na pink, na nchekwa abụọ dị mkpa 32GB na 128GB yana n'ụdị naanị na WiFi na nke ọzọ gụnyere LTE njikọta site na eSIM. IPad a toro ma nwee ekele na oge ndị a, ahụmịhe ahụ na-enye afọ ojuju ma ọ kachasị atụ aro ka ị na-eri ọdịnaya n'ụlọ, soro ụmụ akwụkwọ na-ekele ndị ọzọ ya na keyboard na òké yana maka ndị chọrọ mgbakwunye na agagharị na mmefu ego.
A ewu àgwà na ihe recognizable na Apple
Ọganihu iPadOS na-eme mgbe niile mere ka ọ bụrụ ngwaahịa maka ịmepụta ọdịnaya na ọ bụghị naanị iri ya
Ọ bụ aka ala otu n'ime uru kachasị mma Apple maka ngwaahịa ngwaahịa
Ihuenyo ahụ etoola site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ inch, mana ha na-aga n'ihu ịkụ nzọ na LCD ọdịnala na-enweghị ihuenyo laminated
Ngwa dị oke ọnụ n'ịtụle ọnụahịa ngwaahịa a
Njikọ USB-C gaara eme ka ọ bụrụ ngwaahịa flagship
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » iPad (2019): dị ọnụ ala ugbu a ibu [Nyocha]